May 20, 2020 - Lupyo News
May 20, 2020 by Lupyo News
ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ရောင်ခြည်တော် ကွန့်မြူးနေသော ဗွီဒီယို ဖိုင် ဖူးမျှော်ကြည်ညိုရန်… ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ရောင်ခြည်တော် ကွန့်မြူးနေသော ဗွီဒီယို ဖိုင်ထွက်ပေါ် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ဉာဏ်တော်မှာ ဖိနပ်တော်မှ စိန်ဖူးတော်ထိ (၃၂၆) ပေဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ရှိ သိင်္ဂုတ္တရ ကုန်းတော်ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ လေးဆူဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံ ဟုလည်း ခေါ်တွင်သည်။ စေတီအစ ရွှေတိဂုံက ဟုဆိုကြသည်။ အမည်ခေါ်တွင်ပုံ ရန်ကုန်တိုင်းကို မွန်လူမျိုးတို့သည် ဒဂုံတိုင်းဟု သမုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒဂုံတိုင်းမှာ တည်ထားသော ဘုရားဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့်ဒဂုံတိုင်းကဘုရားဟု ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ မွန်ဘာသာဖြင့် ကျာ်လဂုင် ဟုရေးသားပြီး ကျိုက်လဂုံဟုအသံထွက်ဆိုခဲ့ကြသည်။ တတိယမြန်မာနိုင်ငံကို တည်ထောင်ခဲ့သော အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်တွင် မွန်တို့ကို တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပြီးနောက်ဒဂုံကို ရန်ကုန်ဟု အမည်နာမ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကျိုက်လဂုံကို ကျိုက်ဒဂုံဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကျိုက်လဂုံ(သို့) ကျိုက်ဒဂုံသည် … Read more
ကျွန်မအသက်၂၈ နှစ်ကျော် အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ကလေးတော့ မရှိသေးပါဘူး
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှဝင်ဖတ်ပါ ….. Q: ကျွန်မအသက်၂၈ နှစ်ကျော် အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ကလေးတော့ မရှိသေးပါဘူး။ အခု နိုင်ငံခြားမှာပါ။ ရင်သားကို လ်ိမ်းဆေး၊ ထိုးဆေးတွေမသုံးပဲ သဘာဝအတိုင်း ဖွံ့ဖြိူးလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆရာ။ ရင်သား သေးနေရင် ကလေး ရလာတဲ့ အချိန်ကျရင် ကလေးအတွက် မိခင်နို့ရည် အခက်အခဲရှိမှာ စိုးလို့ပါ။ ကိုယ်ဝန်တားနည်း ကွန်ဒုံ သုံးပါတယ်။ ရင်သား ကြီးထွားချင်တာမှာ တချို့က တဖက်သား ဆွဲဆောင်ဘို့ရာ ကြီးချင်တာ။ တချို့က နို့ထွက်များ ခြင်တာ။ မေးတာက အလှအပအတွက် မဟုတ်ဘဲ ကလေးရရင် နို့ထွက်နည်းမှာ စိုးလို့ဆိုတာ ရည်ရွယ်ချက် အင်မတန် မွန်မြတ်ပါတယ်။ တားဆေးကြောင့် မဟုတ်တဲ့အချက် ဖယ်လို့ ရပါပြီ။ ရင်သားမှာ ကြွက်သားမပါဘူး။ အဆီ … Read more
မုန်တိုင်းကြီး ကုန်းပေါ်တက်တော့မည်…ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ… မုန်တိုင်းကြီး ကုန်းပေါ်တက်တော့မည်… Super Cyclone AMPHAN ယနေ့ နေ့လည် – ညနေပိုင်းတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ဘင်ဂေါပြည်နယ် Chuksar Island Jambu Dweep Sugar Island တို့သို့ရောက်ရှိနိုင်ကာ ညပိုင်းတွင် Hooghly မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ (အနောက်ဘင်ဂေါ) မှ ကုန်းတွင်းဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ် …. ကုန်းတွင်းဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်စဉ် တစ်နာရီလေတိုက်ခတ်နှုန်း ၁၀၀မိုင် လေပြင်းတိုက်ချိန် ၁၁၅မိုင်နှုန်းရှိနိုင်ပါတယ် ရေလှိုင်းအမြင့် ဗဟိုတွင် ၄၂ပေအထိရှိနိုင်ပါတယ်…. #ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ အဆိုပါမုန်တိုင်းကြီးကြောင်း ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်နိုင်ပြီး လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်……မြန်မာ့ရေပိုင်နက်အတွင်း ကမ်းနီး ၁၂ပေ ကမ်းဝေး ၁၅ပေအထိ ရေလှိုင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်…. မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင်မိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီး မွန်ပြည်နယ် ရခိုင်ပြည်နယ် ချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံးနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်…..။ 20/05/2020 at 9:23am (MMT) … Read more
အ​မေက​နောက်​​ယောကျာ်းနဲ့ အ​ဖေက​နောက်​မိန်းမနဲ့ မိ​ထွေးကိုယ်​တိုင်​လာပို့သွားတာ မိဘမဲ့​ဂေဟာကို သနားစရာ​လေး​ ဗီဒီယိုဖိုင်
အ​မေက​နောက်​​ယောကျာ်းနဲ့ အ​ဖေက​နောက်​မိန်းမနဲ့ မိ​ထွေးကိုယ်​တိုင်​လာပို့သွားတာ မိဘမဲ့​ဂေဟာကို သနားစရာ​လေး​ ဗီဒီယိုဖိုင် Vedio အောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်သည် တကယ်သနားစရာကောင်းတဲ့ ကလေးရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပါ။အမေကလည်းနောက်ယောင်္ကျားနဲ့ အဖေကလည်း နောက်မိန်းမနဲ့ တဲ့ ခုဒီကလေးကို မိဘမဲ့ဂေဟာလာပို့ သွားတာက မိဒွေးက လာပို့ သွားတာတဲ့။ဘယ်လောကိတောင် ဆိုးရွားပြီးသိက္ခာဆိုတာမရှိ မိဘမေတ္တာဆိုတာမရှိတဲ့ မိဘတချို့ ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ။နောင်တစ်ချိန် ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ ဒီဒဏ်တွေကို ခံစားလာရတာက ကလေးငယ်လေးတွေပါ။ ကလေးပြောစကားအရတော့ မိဘက သင်္ကန်းကျွန်းမှာဖြစ်ပြီး အဖေကရခိုင်လို့ ပြောသံကြားခဲ့ရပါတယ်။ Vedioလေးကြည့်ပြီး ကလေးငယ်လဝလေးကို ထပ်တူကြေကွဲရပါတယ်။ Vedioလေးကြည့်ပြီး မိတ်ဆွေတို့ လည်း သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာကာ ရှဲပေးကြပါအူး =========== Unicode အမကေနောကျယောကျြားနဲ့ အဖကေနောကျမိနျးမနဲ့ မိထှေးကိုယျတိုငျလာပို့သှားတာ မိဘမဲ့ဂဟောကို သနားစရာလေး ဗီဒီယိုဖိုငျ Vedio အောကျဆုံးတှငျပါဝငျသညျ တကယျသနားစရာကောငျးတဲ့ ကလေးရဲ့အဖွဈအပကျြလေးပါ။အမကေလညျးနောကျယောင်ျကြားနဲ့အဖကေလညျး နောကျမိနျးမနဲ့တဲ့ … Read more
နောက်ဆုံးပို့ဆောင်ဖို့ လာကြိုသည့်သူနှင့်အတူ..မိန်းကလေးတစ်ယောက်သေဆုံးသွားခြင်း နောက်ဆုံးပို့ဆောင်ဖို့ လာကြိုသည့်သူနှင့်အတူ..မိန်းကလေးတစ်ယောက်သေဆုံးသွားသည်။ သူ … ဒါကို သတိထားမိတဲ့အချိန် သေမင်းဟုယူဆရသည့် ဝတ်ရုံနက်ခြုံထားသောလူကြီးက သူ့ဘေးရောက်နှင့်နေပြီ၊ လက်ထဲမှာလည်း တစ်ဖက်က သူကိုင်နေကျ တူရွှင်းအရှည်ကြီးနှင့် နောက်တစ်ဖက်မှာ လက်ဆွဲသေတ္တာလေးတစ်ခုနှင့် သေမင်းက …ထိုမိန်းကလေးကိုပြောသည်၊”လာ … ကလေးမလေး သွားဖို့အချိ်န်တန်ပြီ မိန်းကလေး “ဟင် … မြန်လိုက်တာ … သမီးမှာ လုပ်စရာ အစီအစဉ်တွေအများကြီးကျန်သေးတယ်၊ သေမင်း “တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အချိန်မရှိတော့လို့ပါ … မိန်းကလေး “ဦးလက်ထဲက သေတ္တာထဲမှာ …ဘာတွေထည့်ထားတာလဲ?” သေမင်း “မင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဥစ္စာတွေ” မိန်းကလေး “သမီးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဥစ္စာတွေ ဟုတ်လား ? ဦးဆိုလိုတာ သမီးရဲ့အဝတ်အစားတွေ၊ ရွှေတွေ ငွေတွေကိုလား …” သေမင်း “အဲဒီဥစ္စာတွေက … Read more
ဓမ္မတာသွေးအရောင် ဒါမှမဟုတ် အဖြူဆင်းတဲ့အရောင်ကတဆင့် သိနိုင်မယ့် သင့်သားအိမ်ကျန်းမာရေး
ဓမ္မတာသွေးအရောင် ဒါမှမဟုတ် အဖြူဆင်းတဲ့အရောင်ကတဆင့် သိနိုင်မယ့် သင့်သားအိမ်ကျန်းမာရေး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ရာသီသွေးအရောင်ကနေ သိနိုင်တယ်ဆိုရင် အံ့ဩသွားမလား။ ဥပမာ ဝါညိုရောင်သွေးဆင်းတာဟာ မိန်းမကိုယ်ပိုးဝင်ခြင်းကို ဖော်ပြနေတတ်ပါတယ်။ ရာသီသွေးဆင်းချိန်မှာ သားအိမ်အတွင်းက သွေးနဲ့တစ်ရှူးတွေကို မိန်းမကိုယ်ကတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်က စွန့်ထုတ်ပါတယ်။ သွေးဆင်းတဲ့အခါ သူရဲ့သက်တမ်းကိုမူတည်ပြီး အနီရဲရဲကနေ အညိုရင့် သို့မဟုတ် အမည်းရောင်အထိ အရောင်အနုအရင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲနဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကလည်း ရာသီသွေးရဲ့အရောင်နဲ့ အသွင်ပုံစံကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ရာသီသွေးအရောင်က ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေ မှာ ကွဲပြားကြတာလဲ၊ ဘာအကြောင်းရင်းတွေရှိနေတာလဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်ပြဖို့လိုတာလဲ ဆိုတာတွေ ဖတ်ရှုရမှာပါ။ အမည်းရောင် အမည်းရောင်ရှိတဲ့ ရာသီသွေးဟာ ရာသီစလာခါစ သို့မဟုတ် ပြီးခါနီးရက်မှာ လာတတ်ပါတယ်။ သွေးက သားအိမ်ထဲမှာ ကျန်နေတာကြာနေပြီး အောက်စီဂျင်နဲ့ဓာတ်ပြုဖို့ အချိန်ရခဲ့တဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ … Read more
မယားရှိ… ယောက်င်္ကျားတွေလင်ရှိတဲ့ …မယားတွေအသေချာ ဖတ်ကြည့်သွားကြပါ
တိုက်ဆိုင်လို့မခံနိုင်ဘလော့သွားပါ မယားရှိ… ယောက်င်္ကျားတွေလင်ရှိတဲ့ …မယားတွေအသေချာ ဖတ်ကြည့်သွားကြပါ လင်ရှိတဲ့ မယားတွေမယားရှိတဲ့ဖွန်ရူးတွေ သေချာဖတ်ပါဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ရတဲ့ဘဝမရောက်ခင်ပြင်သင့်တာကိုပြင်ပါ သက္ခာ အကြောက်တရား မရှိရင်ဆက်လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြပါသူတော်စဉ်ယောင်ယောင် လူကြီးလူကောင်ယောင်ယောင်နဲ့ကြောင် သူတော်ကြွက် သခိုးမလုပ်ကြပါနဲ့ Online သုံးပြီး အရွံဆုံးကလင်ရှာမယားရှာလင်ရူးဖွန်ရူး တွေပဲအိမ်ကညီမ အမ နဲ့ဇနီမယားကို လူများတွေကြည့်မှာကိုကြောက်တဲ့လူသဝန်တိုတတ်တဲ့လူလူများသားမယားကိုကြတော့ဘာလို့အချောင်နှိက်ချင်နေကြတာလဲ …? တိုက်ဆိုင်လို့ စိတ်ဆိုးရင် တစ်ခါတည်းBlock သွားပါ အမှန်တရားက အမှန်တရားပါပဲ “အိမ်ထောင်ရှင်နှင့်” On Line ” အန္တရာယ်” ခေတ် ကာလ ပြောင်းလာသည်နှင့်အမျှ(ပြစ်မူ့)ကျူးလွန်မှု့များသည် ပို၍ပို၍ လွယ်ကူလှသည်။ ရှေးယခင်ချစ်သူရည်းစားထားဖို့ခက်ခဲကောင်း.ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ယခုခေတ် ကာလတွင် ” Online Chatting”ပြုခြင်းစသည်များပေါများလာသည်။ဖုံးနှင့်လက်ညိုးထိရုံဖြင့် ရည်းစားဖြစ်သွားကြသည်။ အိမ်တွင်းပုန်းများသိက္ခာရှင်အမျိုးသမီးများယောက်ျားတယောက်နှင့်ပြင်ပ၌စကားပြောဖို့ကြောက်ရွံ့သူများပင် အမျိုးသားများစွာဖြင့်” chat box” မှာ သာယာနေကြသည်။ ” Facebook,Bee-Talk,WeChat “စသည့်နေရာများ၌ အပျိုအအို … Read more
အ၀ှါလှန်ပြပီး ရန်တွေ့လိုက်တဲ့ လမ်းမပေါ်က ရန်ပွဲ ရုပ်သံ
အ၀ှါလှန်ပြပီး ရန်တွေ့လိုက်တဲ့ လမ်းမပေါ်က ရန်ပွဲ ရုပ်သံ လူတစ်ခု ပူမှုရယ်တဲ့ ဆယ်ကဋေ ဆိုသလို လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ့်အပူနဲ့ကို မပြေလည်မှု အဆင်မပြေမှု မကျေနပ်မှု ဘ၀င်မကျမှုများ အနည်းအများ ရှိကြသည်သာဖြစ်ပါသည်။ ယခု လမ်းပေါ်က ရန်ပွဲကတော့ အတော့်ကို ကြမ်းလှပါသည်။ ဒီလောက်လူတွေ ၀ို င်းအုံကြည့်နေသည့် ကြားမှပင် တစ်ဖက်ကို ထမိန်လှန်ပြပီး ကက်ကက်လန်ရန်တွေနေလိုက်တာဗျာ။ ပြောဆိုသုံးနှုန်းတဲ့ စကားလုံးများကလည်း အရင့်သီးဆုံး အကြမ်းတမ်းဆုံးတွေ။ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လောက်နာကျည်းမုန်းတီးနေသလဲတော့ မသိပါ။ သူ့ခံစားချက် နဲ့ သူ့နာကျည်းချက်လည်း ဘယ်လောက်ရှိမယ်တော့ ကိုယ်မသိပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ဒီလောက်ကြီးထိတော့ မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့ဗျာ။ လူတစ်ယောက်ကို တစ်ကယ်မုန်းပီး နာကျည်းပီးဆိုရင် နှုတ်နဲ့လည်း ခွန်းတုန့်မပြန်ပါနဲ့၊ ကိုယ်နဲ့လည်း မတုန့်ပြန်ပါနဲ့။ သူနဲ့ပတ် သက်ပီး ကောင်းတာဖြစ်စေ မကောင်းတာဖြစ်စေ … Read more
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာ လိင်ဆက်ဆံတာ စိတ်ချရလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာ လိင်ဆက်ဆံတာ စိတ်ချရလား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံတာ စိတ်ချရလားဆိုတာ ဖေဖေလောင်း မေမေလောင်းတို့ သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေး ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လိင်ဆက်တာဟာ သန္ဓေသားလေးကို ထိခိုက်နိုင်လား ဖေဖေလောင်း မေမေလောင်းတို့အနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံဖို့ အတော့်ကို စဉ်းစားစိတ်ပူကြရမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သန္ဓေသားလေးကို ထိခိုက်မှာစိုးရိမ်တာကြောင့်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံတာ စိတ်ချရလားဆိုတာ ဖေဖေလောင်း မေမေလောင်းတို့ သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေး ဖြစ်မယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ စိတ်ချရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် လိင်ဆက်ဆံနည်းတွေကိုလည်း မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် လိင်ဆက်ဆံခြင်း မေမေလောင်း ဖေဖေလောင်းတို့အနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ချစ်တင်းနှောချင်စိတ်တော့ ဖြစ်ချင်မိကြမှာပါ။ ဆရာဝန်တွေကတော့ ကိုယ်ဝန်အစ ပထမ(၃) လ ကာလအတွင်းမှာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွေ ရှောင်ကြဉ်ဖို့ မှာကြားမှာပါ။ တကယ်လည်း အဲဒီကာလ … Read more
ကျနော် မိန်းမယူပီးရင် မိန်းမကို ဒီလိုလုပ်ခိုင်းမှာ 👇👇👇
ကျနော် မိန်းမယူပီးရင် မိန်းမကို ဒီလိုလုပ်ခိုင်းမှာ 👇👇👇 ~မိန်းမ ထစမ်း အခုချက်ချင်းထ မင်းအမေအိမ်မှာလို အိပ်လို့မရဘူး နာရီကျိဦး ၈နာရီ ထိုးတော့မယ် ကိုရုံးသွားရဦးမယ် 😕😕😕 ~ထ ထ သွားမျက်နှာသစ် ရေမိုးချိုး စင်ပေါ်မှာ သွားတိုက်ဆေး အဆင်သင့်ပြင်ထားပီးပီ 😁😁😁 ~ပီးရင် သနပ်ခါးလိမ်းဖို့ သွေးထားပီးသား မင်းဝတ်ဖို့အကျီင်္ ဟိုမှာ အဆင်သင့်ချထားတယ် 😁😁😁 ~သြော် ထစမ်း ငါကွာ😐 စောင်တေခေါက်မလို့ ဘေးဖယ် 😁 ~သွား မြန်မြန်ချိုးခဲ့ နံနက်စာပြင်ပီးပီ ဈေးလဲသွားပီးပီ မင်းနေ့လည်စားဖို့ မုန့်တေဝယ်ခဲ့တယ် ကွကိုယ်စား 😁😁😁 ~ညစာ ကိုယ်ပြန်လာမှ ချက်မယ် စကားနားထောင် ကြားလား😏 ~အဝတ်တေမလျှော်နဲ့ အအေးပတ်ပီး ဖျားနေမှ ကိုစိတ်ပူနေရမယ်😖 အဝတ်တေ ဝတ်ခြင်းထဲသေချာထဲ့ထား … Read more